Vaovao - Ny tsenan'ny tsenan'ny fitaovana vita amin'ny fantsom-boaloboka dia tena malalaka
Ny tsenan'ny tsenan'ny fitaovana fantsom-boaloboka dia tena malalaka
Indraindray maharitra ny fitaovana fantsom-by vita amin'ny fantsona ary mila indostria toy izany ny firenena sy ny vahoaka! Amin'ny dingan'ny fampandrosoana nasionaly dia mitombo ny fangatahana vy, ka ny haben'ny fantsom-by amin'ny famokarana vy dia mihalehibe hatrany. Ny famokarana ny fantsom-panafody dia azo zaraina ho sokajy roa, ny iray dia fantsom-pandrosoana tsy misy fangarony, vokarin'ny fanodinana, fitrandrahana ary fanaovana sary.
Inona no tena dikan'ny marika milina fantsom-boaloboka, orinasa mpandraharaha fantsom-boaloboka natolotry ny olona: ny fitambaran'ny organika amin'ny kalitao, ny asany ary ny mety ho fivoaran'ny telo mba hananganana ny tena fiantsoana ny anaran'ny marika ny tarika fantsona fantsona. Ny kalitao, dia ny foiben'ny fahaterahan'ny marika marika amin'ilay milina fantsom-pilafy. Ny kalitaon'ny vokatra fantsona fantsom-boaloboka avo lenta, ny vidiny mirary ary ny serivisy feno fiheverana no takiana mba hahazoana ny faneken'ny mpanjifa sy ny fiaraha-monina.
Ny kalitaon'ny tariby fantsom-boaloboka no fototra sy làlan'ny fitantanana marika. Rehefa miditra amin'ny vanim-potoana fiovana haingana ny toekarena manerantany, ireo orinasan-tsolika fantsom-pahefana vita anaty fahitana dia manolo-tena amin'ny fanavaozana ny vokatra mahazatra amin'ny vokatra vita amin'ny fantsom-pamokarana vita amin'ny fantsona.
Ny milina fantsom-boaloboka dia ahafahana mampiasa loharanon-kevitra angon-drakitra marobe, ka nahatonga ny fiovana ara-tsiansa amin'ny marketing, izay mahatonga ny fizotran'ny marketing iray manontolo amin'ny tarika fantsom-boaloboka azo antoka kokoa.
Ny tariby fantsom-boaloboka dia manisa ny fitondran-tena amin'ny marketing amin'ny alàlan'ny fametrahana ny zava-drehetra amin'ny famakafakana angon-drakitra siantifika mba hisafidianana araka ny tokony ho izy ny isan'ny mpanjifa, fa tsy ho fampanjariam-bola an-jambany sy tsy ara-drariny ary hahavery ny mety ho mpanjifa sy ny efa misy.
Ny fanaraha-maso fikojakojana ny fikosoham-bary dia miovaova arakaraka ny fahita matetika, ny toetran'ny tontolo iainana sns. (Jereo ny tabilao 1). Ny tabilao 1 dia mampiseho ny masonkarena fanaraha-maso fikojakojana. Ny tena ifantohan'ny fanaraha-maso ny fikojakojana dia ny fizahana ny milina tsindraindray ary ampy ny fanjifana sy ny kojakoja vonjy maika hiantohana ny fiasa ara-dalàna sy ny famokarana.